न्यूज सञ्जाल: » ‘इमानदार’
न्यूज सञ्जाल २३ पुष २०७७, बिहीबार ०८:४७
इमानदार आफैँमा मात्र इमानदार भएको छ । न त उसलाई कसैले भाउ (मान) दिएको छ, न सम्मान पाएको छ। बिचरा ! जस जसलाई भेटो सबैले म जति इमानदार कोही छैन, ब्याख्या र बढाइबाहेक उसले अरु केही देखेको छैन ।
उ चिया गफमा, टोल टोलको भेलामा, घर घरको कहानीमा जहाँ पनि गफाडीको गफमा मात्र काम लागेको छ । न त उसलाई ब्यवहारमा लागु गरियो, न त कसैले बिश्वासमा लिन सके । उ उसैमा मात्र सीमित भयो । उसले न कसैलाई साथी बनाउन सको, न कसैले उसलाई साथी बनाए । उ यसरी एक्लै भएको अनुभव गर्दैछ कि आफूले आफैँलाई बिश्वास नगर्ने अवस्थामा पुगे जस्तो छ।उसको बस चल्ने हो भने नेपाली शब्दकोषबाट आफ्नो अस्तित्व (नाम) मेटाइदिन्थ्यो । तर, के गरोस्, यो पनि त उसको बुताभित्र पर्दैन।
आज उ निक्कै निरास थियो । सबैले मानेको, उसले पत्याएको, एउटै घर बफादारको थियो । घर भित्रपट्टि बफादार छोरा इज्जतदारलाई गाली गर्दैथ्यो । ३०-३० वर्षको भैसकिस्, तैले खै के गरिस् ?, उ पल्लो घरको सत्यलाई हेर त ! त जस्तै जागिर खान्छ हैन, उसँग के छैन ?, घर, गाडी, घडेरी। तँ… तँ… के गरि खान्छस् । सँगै पढेको, एउटै चिट्ठीबाट जागिर खाएको हैन । तँ चाहिँ किन लुखुरे, न घर, कार, न घडेरी, खै तेरो बुद्धि ! सिक, उसँग सिक ।
ससुरालाई साथ दिँदै बुहारी सतिसाबित्रीले आगोमा घ्यु थपिन्, बाबा मैले दिनरात भनेको भनैछु, मान्दै मान्नु हुन्न । एकदमै डराउनु हुन्छ । कस्ता कस्ता मांग्न आकाथे ! उहाँकै बिश्वास लागेकोले भागेर आएँ । अहिले न चिताको पुगो, न सुखै पाइयो। उता माइतीमा बेइज्जत उस्तै छ, गतिलो खोजेर गाकि हैनस्, खुबै देखियो भन्छन् । म वाक्क भैसकेको छु।
सबै मिलेर इज्जतदारको सातो लिन थाले । यस्तो सुनेर इमानदार निलो कालो हुँदै कसैलाई नभेटी रन्थनिँदै फर्कियो।
हैन यो के भाको, घर-घरमा मेरो (इमानदारको) न मान छ, न सम्मान ! के म सकिन लागेको नै हो त ? यस्तै चाल हो भने मेरो अस्तित्व समाप्त हुन के बेर ! यो ठाउँमा म बस्तै बस्तिनँ । अहँ, म बस्तिनँ, बस्तिनँ ! एक, दुई, तीन बस्तिनँ -बस्तिनँ । उ एकोहोरिनु एकोहोरिएको थियो । आजसम्म उ कहाँ छ ?, कसैलाई थाहा दिएको छैन ।
म उसलाई बोलाउन चाहन्थेँ, फर्काउन चाहन्थे, उसको मान-सम्मान राख्न चाहन्थेँ, सकिनँ । म पनि बफादारकै छिमेकी घरको सदस्य न परेँ । आज इमानदारको खुब खोजी हुँदैछ । कहाँ हरायो -हरायो । अहँ कसैले फेला पार्न सकेका छैनन् । उसको खोजी निरन्तर रुपमै भैरा’को छ, फेला पार्ने कसैले होइन । तर, पनि खोजी निरन्तर नै छ ।